Kwete Yakajairwa Hotera: St. Regis Inopa Nyowani Gadziriso kune reNzanga Dambudziko
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Hotera & Resort Nhau » Kwete Yakajairwa Hotera: St. Regis Inopa Nyowani Gadziriso kune reNzanga Dambudziko
Kuputsa Kufamba Nhau • tsika nemagariro • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Nhau Dzakanaka • nhau • Dhinda Zviziviso • ushanyi • Tourism Kutaura • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau
Muna 1904, Colonel John Jacob Astor akaputsa nzvimbo yekuvakwa kweSt. Regis Hotel pakona yeFifth Avenue uye 55th Street muchikamu chekugara cheNew York panguva iyoyo.
Vagadziri vacho vaive Trowbridge naLivingston avo vaive kuNew York.
Vabatsiri vekambani iyi ndiSamuel Beck Parkman Trowbridge (1862-1925) naGoodhue Livingston (1867-1951).
Trowbridge akadzidza paTrinity College muHartford, Connecticut. Paakapedza kudzidza muna 1883, akaenda kuColumbia University uye akazodzidza kunze kwenyika kuAmerican School of Classical Study muAthens uye kuEcole des Beaux-Arts muParis.
Paakadzokera kuNew York, akashandira mugadziri George B. Post. Goodhue Livingston, anobva kumhuri ine mukurumbira muNew York yekoloni, akagamuchira degree rake repayimari uye akapedza degree kubva kuColumbia University. Muna 1894, Trowbridge, Livingston naStockton B. Colt vakaita mubatanidzwa wakagara kusvika 1897 pakaenda Colt. Iyo femu yakagadzira dzinoverengeka dzinozivikanwa zvivakwa zveveruzhinji uye zvekutengesa muNew York City. Kunze kweSt. Regis Hotel, akanyanya kuzivikanwa aive dura reB.Altman department (1905) pa 34th Street naFifth Avenue, Bankers Trust Company Building (1912) pa14 Wall Street neJP Morgan Building (1913) mhiri kwe mugwagwa.
Muna 1905, iyo Regis yaive hotera refu muNew York, yakamira pamatanho gumi nematanhatu. Mutengo wemba yaive $ 19 pazuva. Ihotera yacho payakavhurwa, muchina wekudhinda wakatsanangura St. Regis se "hotera yakashongedzerwa kwazvo uye ine mbiri pasi rose."
Iko kuvaka kwakadhura anodarika $ 5.5 mamirioni emadhora, isinganzwike-yemari panguva iyoyo. Astor haana kubhadhara mari mumidziyo: marble pasi nemigwagwa kubva kumakomba eCaen, fenicha yeLouis XV kubva kuFrance, Waterford crystal chandeliers, machira ekare uye mataa ekumabvazuva, raibhurari izere nemazana matatu ematehwe akasungwa-eganda, mabhuku egoridhe. Akange akaisa madhoo maviri ekupinda akanaka endarira, matanda asingawanzo, matombo makuru emarble, siringi yekushongedza uye nhare mukamuri yega yega, izvo zvaive zvisina kujairika panguva iyoyo.
Pakavhurwa St. Regis Hotel muna 1905, General Manager Rudolf M. Haan akaburitsa bhuku rine mapeji makumi maviri nemasere rekusimudzira bhuku rine mifananidzo ine makumi mana neshanu:
Iyo St. Regis Hotera
"Mukunyora kweSt. Regis Hotel zvakafanira kuyeuka kuti hatisi kubata nerudzi rwehotera yakajairika, asi nemhinduro yedambudziko renharaunda rakamanikidzwa kwatiri nemamiriro ezvinhu ezuva ranhasi. Nguva yaive apo iyo hotera yaingoreva pekugara chete kune mufambi; mumazuva ano, zvakadaro, inofanira zvakare kuverenga nevanhu vane dzimba dzakanaka, avo vanowanzoona zviri nyore kuvhara dzimba dzavo kwevhiki kana mwedzi mishoma; vanhu kune avo pfungwa yekupa nekunyaradza kwepamba, sevhisi yakanaka uye chikafu, uye mhepo yekuravira nekunatsiridza yakambove dambudziko. Kugovera zvakanangana nekirasi iyi yevaAmerican nenzira dzakaringana, pasina kuregera muenzi wehusiku humwe chete kana vhiki, kana kunyangwe kudya kwekudyira, yaive pfungwa yaVaHaan, mutungamiri wenyika uye mweya unotungamira wekambani. Nezve kubvumidzwa kwayo naCol.John Jacob Astor uye nehunyanzvi kubatana kwevagadziri, Messers. Trowbridge & Livingston, iyo St. Regis paMakumi mashanu neshanu Street naFifth Avenue inomira sechiyeuchidzo…
Iyo Regis inovhara nzvimbo yemamirimita zviuru makumi maviri, uye parizvino ihotera refu kwazvo muNew York. Nzvimbo yaro yakasarudzwa zvakanaka, nekuti, iri mukati memwoyo weakanakisa chikamu chekugara cheNew York, munzira yeguta ine fashoni uye mukati memabhuru mana eCentral Park, inowanikwa nyore nyore kubva kumativi ese, uye mazhinji ezvitoro zveguta. , pamwe nenzvimbo dzekutandarira, zviri mukati mekufamba nyore nyore. Kune avo vanosarudza kutyaira, inoshanda ngoro basa rakagadzirira usiku nemasikati…
KuDhipatimendi rehutsanana nekuchengeteka ndezvimwewo zvinhu zviviri, izvo zviri muSt Regis zvinoshandiswa kwenguva yekutanga kusvika pakazara- kurongeka kwemweya wakachena uye kurasa guruva nemarara. Kune yakaiswa sisitimu yekumanikidza kufefetedza kwakasanganiswa neasina kunangana nemwaranzi izvo zvinopa mukati mechivako kupi kwese kwemhepo yakachena, yakachena, kudziirwa kana kutonhorera sezvo mamiriro ekunze angangoda… ..
Pamakamuri mana-kana mashanu-enhurikidzwa dzimba dzakapihwa umo mweya wekunze unopinda, unosvinwa kuburikidza neshinda-machira mafirita, kudziirwa nekupfuura pamusoro pemhepo makoiri, uyezve kutenderedzwa nemagetsi emagetsi kuburikidza nemadhiriji kuenda kumakamuri akasiyana. Zvitoro mumakamuri zvakavanzwa mukunakidzwa kusingaonekwe mumadziro kana mune rekushongedza basa rendarira iro rinotamba chikamu chikuru mukushongedza. Muenzi anogona kudzora tembiricha mukamuri rake achishandisa otomatiki thermostat. Kuenderera mberi kwekutenderera kwemhepo kunochengetwa mukati mechivakwa, husiku neusiku: hapana zvirevo, hapana mhepo yemuchadenga kutya; mukutaura chokwadi muenzi haafanire kuvhura hwindo rake kuti apihwe yakawanda yakawanda mweya wakachena. Iyi sisitimu ndeye kufambira mberi kukuru pamusoro peyakare-nguva makoiri ane ruzha uye akashata uye zvimwe asina chokwadi muhuwandu hwekupisa unopihwa. Mhepo isina kuchena inoburitswa nevese mafeni. ”
Iyo-yakakosha kumashure-kwe-iyo imba yakazivikanwa uye yakatsanangurwa mubhuku reSt Regis Hotel: